တရားမဝငျ ကြောကျစိမျးအရိုငျးတုံးမြား သယျဆောငျလာတဲ့ကား နဘား စုပေါငျးရေး ဂိတျမှာ ဖမျးမိ – Voice of Myanmar
ကိုတိုးကွီး ( VOM )
အငျးတျောမွို့နယျ နဘားတိုကျနယျ ရှဘေို – မွဈကွီးနား ဗြူဟာလမျး နဘားစုပေါငျး စဈဆေးဂိတျမှာ ယခုလ ၄ ရကျနေ့ မနကျ ၆ နာရီခှဲ အခြိနျက တရားမဝငျ ကြောကျစိမျးအရိုငျးတုံးမြား သယျဆောငျလာတဲ့ ကားတဈစီးကို ဖမျးဆီးလိုကျကွောငျး အငျးတျောမွို့မရဲစခနျးက သိရပါတယျ။
အငျးတျောမွို့မရဲစခနျးက ရဲအုပျ ဇျောမွငျ့ဦး နှငျ့အဖှဲ့ဟာ ဒီမနကျမှာပဲ နဘားစုပေါငျး စဈဆေးရေးဂိတျမှာ ပိတျဆို့ စဈဆေးရေး လုပျငနျးမြားကို လုပျကိုငျနခြေိနျ ရှဘေို – မွဈကွီးနား ကားလမျးအတိုငျး မွဈကွီးနား ဘကျကနေ ရှဘေိုဘကျကို မောငျးနှငျလာတဲ့ WINGROAD အဖွူရောငျး ယာဉျအမှတျ DD / 72 …. ကားတဈစီးကို စဈဆေးရာမှာ ကားရဲ့ကွမျးပွငျအောကျ အံဝှကျထဲ နရောနဲ့ စပယျယာဘီးထားတဲ့ အံဝှကျနရောကနေ ကြောကျစိမျးအရိုငျးတုံးမြားနဲ့ ကြောကျစိမျးလကျကောကျ အကွမျးထညျမြားကို အဝါရောငျ တိတျစနဲ့ ရဈပတျပွီး သယျဆောငျလာတာ တှရှေိ့ရတာကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့က ဖမျးဆီးလိုကျတာဖွဈ ပါတယျ ။
အငျးတျောမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ရဲအရာရှိ တဈဦးက “ အမှုဖှငျ့တာက ဒီနေ့ နလေ့ညျ ၁ နာရီ မိနဈ ၂၀ မှာ ဖှငျ့တယျ ၊ အရိုငျးတုံးက ၁၅ တုံး နဲ့ ဖွတျပိုငျးစတှလေဲပါတယျ ၊ လကျကောကျကှငျးအကွမျးထညျ ၅၇၂ ကှငျးဖွဈတယျ ..ကာလတနျးဖိုးက ကြောကျစိမျးတူးဖျောရေး ဌာနက သတျမှတျတာဖွဈလို့ မပွောနိုငျပါဘူး ..ဌာနဆိုငျရာ အခငျြးခငျြး ခြိတျဆကျမေးထားပါတယျ ”
အဆိုပါ ကြောကျစိမျးအရိုငျးတုံးမြားနဲ့ လကျကောကျကှငျး အကွမျးထညျမြားကို နပွေညျတျော ဘူးကှဲဝဏ်ဏ သိဒ်ဓိရပျကှကျနေ ကိုဆနျးလှငျ (ယာဉျမောငျး / ကြောကျရှာ) လုပျသူနဲ့ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ပုသိမျကွီးမွို့ နယျ ညောငျပငျသာကြေးရှာနေ ကိုအောငျစိုး(ခ) ကိုခဈြသနျး ဆိုသူတို့က သယျဆောငျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
ကြောကျစိမျးအရိုငျးတုံးနှငျ့ လကျကောကျကှငျး အကွမျးထညျမြားကို တရားမဝငျ သယျဆောငျလာတဲ့ လူနှဈဦးကို အငျးတျောမွို့မ ရဲစခနျးက (ပ) ၆၅/ ၂၀၂၀ မွနျမာ့ကြောကျမကျြရတနာ ဥပဒပေုဒျမ ၅၁(က) အရ အမှုဖှငျ့ အရေးယူဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး အဆိုပါ ရဲစခနျးမှ သိရပါတယျ ။
#voiceofmyanmar #VOM #ကြောကျစိမျး
တရားမဝင် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးများ သယ်ဆောင်လာတဲ့ကား နဘား စုပေါင်းရေး ဂိတ်မှာ ဖမ်းမိ
ကိုတိုးကြီး ( VOM )
အင်းတော်မြို့နယ် နဘားတိုက်နယ် ရွှေဘို – မြစ်ကြီးနား ဗျူဟာလမ်း နဘားစုပေါင်း စစ်ဆေးဂိတ်မှာ ယခုလ ၄ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီခွဲ အချိန်က တရားမဝင် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးများ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ကားတစ်စီးကို ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း အင်းတော်မြို့မရဲစခန်းက သိရပါတယ်။
အင်းတော်မြို့မရဲစခန်းက ရဲအုပ် ဇော်မြင့်ဦး နှင့်အဖွဲ့ဟာ ဒီမနက်မှာပဲ နဘားစုပေါင်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ပိတ်ဆို့ စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေချိန် ရွှေဘို – မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းအတိုင်း မြစ်ကြီးနား ဘက်ကနေ ရွှေဘိုဘက်ကို မောင်းနှင်လာတဲ့ WINGROAD အဖြူရောင်း ယာဉ်အမှတ် DD / 72 …. ကားတစ်စီးကို စစ်ဆေးရာမှာ ကားရဲ့ကြမ်းပြင်အောက် အံဝှက်ထဲ နေရာနဲ့ စပယ်ယာဘီးထားတဲ့ အံဝှက်နေရာကနေ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးများနဲ့ ကျောက်စိမ်းလက်ကောက် အကြမ်းထည်များကို အဝါရောင် တိတ်စနဲ့ ရစ်ပတ်ပြီး သယ်ဆောင်လာတာ တွေ့ရှိရတာကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ် ပါတယ် ။
အင်းတော်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက “ အမှုဖွင့်တာက ဒီနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီ မိနစ် ၂၀ မှာ ဖွင့်တယ် ၊ အရိုင်းတုံးက ၁၅ တုံး နဲ့ ဖြတ်ပိုင်းစတွေလဲပါတယ် ၊ လက်ကောက်ကွင်းအကြမ်းထည် ၅၇၂ ကွင်းဖြစ်တယ် ..ကာလတန်းဖိုးက ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး ဌာနက သတ်မှတ်တာဖြစ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး ..ဌာနဆိုင်ရာ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မေးထားပါတယ် ”
အဆိုပါ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးများနဲ့ လက်ကောက်ကွင်း အကြမ်းထည်များကို နေပြည်တော် ဘူးကွဲဝဏ္ဏ သိဒ္ဓိရပ်ကွက်နေ ကိုဆန်းလွင် (ယာဉ်မောင်း / ကျောက်ရှာ) လုပ်သူနဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့ နယ် ညောင်ပင်သာကျေးရွာနေ ကိုအောင်စိုး(ခ) ကိုချစ်သန်း ဆိုသူတို့က သယ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးနှင့် လက်ကောက်ကွင်း အကြမ်းထည်များကို တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာတဲ့ လူနှစ်ဦးကို အင်းတော်မြို့မ ရဲစခန်းက (ပ) ၆၅/ ၂၀၂၀ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၁(က) အရ အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါ ရဲစခန်းမှ သိရပါတယ် ။
#voiceofmyanmar #VOM #ကျောက်စိမ်း